Ukhala ngendawo yokufihla ikhanda ona 82 | News24
Ukhala ngendawo yokufihla ikhanda ona 82
PHOTO:nokuthula khanyile Umkhulu uJohan Shangase othi sekuphele iminyaka elinde indlu yomxhaso.
IMUNCU impilo kumkhulu uJohan Shangase (82), wakwaMpumuza eShayamoya, othi wathenjiswa indlu yomxhaso eminyakeni emihlanu eyedlule kodwa namanje angakayakhelwa.
Kumanje umkhulu wakhe ikoyi eceleni komgwaqo kuyona lendawo kanti uthi usabela impilo yakhe njengoba indawo akhe kuyo ibucayi.
“Ngapatanisa ngathenga othayela ngemali yempesheni ngabe sengicela umfana ukuba angixhumele ikoyi ukuze nami ngibe nendawo yokufihla ikhanda. Kodwa nalo lelikoyi engikhosele kulo lingena amakhaza njengoba kusebusika nezimvula nazo ziyangena futhi kusemgwaqweni ngike ngisabe ukuthi izimoto zingaphaphalaza zilishayise ngiphakathi,” kusho yena.
Uqhube wathi nabafana abasuke bedle amanzi amponjwana badlula bashaye indlu yakhe ngamatshe ebusuku.
“Lendlu engihlala kuyona ayikho sesimweni esilungele umuntu omdala , ayinawo ugesi futhi namanzi awekho. Nabafana abasuke bezidlele amanzi amponjwana abadlula ngendlela bajikijela amatshe ebusuku ngilele.”
Uthe okubuhlungu ukuthi bonke omakhelwane akhelene nabo banemixhaso emagcekeni abo, “Sengizame konke manje, ngaya eminyangweni kahulumeni eyahlukene, ngakhuluma nekhansela nezinduna kodwa akulungi, ikhansela livele lingibuze inamba engabhalisa ngayo nengingasayazi ngoba neminyaka isihambile.”
“Isimo siyadabukisa ngoba ngizalelwe lapha ngakhulela lapha kodwa namanje anginayo indawo yokulala, imizi itholwa ngabantu abafike manje,” kusho yena.
Uthe ngesikhathi ebhalisa bathi indawo akhe kuyona yimbi kufanele athole enye entsha.
Obezama ukwakhela umkhulu indlu kodwa ongathandanga ukuba igama lakhe lidalulwe, uthe bazamile ukumakhela umxhaso ngamandla abo ngoba bebona isimo sakhe kodwa nakhona bahlangabezana nezinkinga.
“Umkhulu bese simtholele indawo lapho besesimakhela khona umxhaso. Lendawo ubeyinikwe omunye ubaba wakhona endaweni kodwa sizibone sesimiswa amaphoyisa nakhona kwathiwa singabe sisaqhubeka nokwakha ngoba indawo yomunye umuntu.
“Okubi ukuthi nangapha endlini yakhe yomxhaso ayikho inqubekela phambili ngoba akucaci ukuthi uyoyithola nini.”
Ikhansela ku-ward 1 u-Amos Mbanjwa lithe belingakaze libikelwe ngaloludaba phambilini,
“Ngingathanda ukuthi ngixhumane naye umkhulu ngibone ukuthi angasizakala kanjani ngoba uma kungukuthi inamba leyo edingekayo usayilahla singakwazi ukusebenzisa inamba yakhe kamazisi ukubheka ukuthi wayebhalise nini.”